Zụta oge elekere YouTube & Zụta elekere 4000 na YouTube
Uru ịzụrụ elekere elekere YouTube na ndị debanyere aha n'aka anyị
Nyere aka tinye ọwa gị ego ngwa ngwa
Ọ dịghị mkpa ichere ruo ọtụtụ ọnwa! Anyị ga-enyere ọwa gị aka inweta ego n'ime izu 2-4. Nke ahụ bụ nkwa anyị mgbe ịzụrụ ọrụ elekere elekere 4000.
Anyị na -eji naanị ụzọ YouTube tụrụ aro iji kwalite vidiyo gị. Yabụ na ọ bụ ya mere anyị ga -eji hụ na ọwa gị ga -adị nchebe 100%.
Mepụta ike kwụsie ike ma nwekwuo ohere ka atụ aro
Iji ruo ihe mgbaru ọsọ ahụ, anyị ga-agbasa echiche banyere ọtụtụ vidiyo na mkpọsa ahụ ga-aba uru na ọwa na usoro Algọridim YouTube na vidiyo ndị a tụrụ aro.
Gbanye uto nke uzo gi ogologo oge
Enwere nsogbu dị oke njọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ YouTuber ọ bụla ọ bụla nwere usoro nke ịmepụta ọwa YouTube ha na-egbochi ha ito ngwa ngwa, nke na-achọpụta ma nyochaa ndị na-asọ mpi ha.
Yabụ, iji bulie ogo ọwa gị na ọkwa ọzọ, anyị ga - enyere gị aka ịghọta niche gị na adịghị ike ndị asọmpi gị site na ịme nyocha ahụ. Mgbe ahụ i nwere ike iji uru gị karịa ha nke ọma.
Otu nkwado enyi na enyi dị 24/7
Site na ahụmịhe bara oke uru na ọwa na-eto eto ma na-akwalite vidiyo, ndị otu anyị ga-enye gị ndụmọdụ eziokwu maka to mụtakwu banyere YouTube na otu esi enweta ego na ikpo okwu yana ọdịnaya gị. Anyị na-anwa ikpuchi nkata ndụ ụbọchị niile na abalị iji nyere gị aka ileba anya n'okwu ọ bụla I nwere.
Ọ bụghị naanị na -enyere ọwa YouTube gị aka ịkpata ego ngwa ngwa. Site na ahụmịhe afọ ise, anyị dị njikere ịbụ onye ndụmọdụ n'oge mmepe ọwa iji nyere gị aka ito na YouTube nke ọma.
Nsonaazụ Mgbe yingzụchara Oge Elekere
Zụta elekere YouTube tupu oge agafee!
Ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụta awa elekere YouTube, ị kwesịrị ịme mkpebi ahụ ngwa ngwa. Mmetụta nke ịzụrụ a ga-eweta uru karịa ka ị chere, na post a ga-aza echiche gị niile. Anyị ga-ejegharị gị site na ihe niile ịchọrọ ịma gbasara itinye ego site na ịzụrụ oge nlele YouTube wee kọwaa otu esi enweta ọrụ kacha mma.
Ị kwesịrị ịzụrụ awa elekere YouTube 2022?
Itinye ego n'ịzụta awa elekere YouTube nwere ike dozie nsogbu ndị YouTubers na-echekarị yana weta ọtụtụ uru ndị ọzọ ị na-echetụbeghị.
Ịdozi ihe isi ike YouTuber na-enwekarị
Ntozu maka nkwụghachi ego
Onye ọ bụla YouTuber nwere ike ịchọ ịkpata ego n'elu ikpo okwu a ozugbo, mana ihe ndị ha ga-emerịrị bụ elekere elekere 4000 na ndị debanyere aha 1000. Usoro a na-ewe oge na mgbalị dị ukwuu, ọtụtụ ndị na-ahapụkwa nrọ ha ịbụ YouTubers n'ihi na ha chere na ọ dịghị mfe.
mgbe ahụ ịzụrụ oge nche ma ọ bụ ndị debanyere aha bụ ihe ngwọta kachasị elu nke ejirila ogologo oge na obodo. Nhọrọ nke iwu kwadoro, ngwa ngwa na nke echekwara nwere ike inyere ndị na-emepụta ọdịnaya aka ngwa ngwa iru ọnụ ụzọ ego.
Nsogbu ọzọ ndị YouTubers na-enwekarị ihu bụ ka esi ebuli SEO nke vidiyo ha. Mgbe ụfọdụ, inwe ọdịnaya dị mkpa na mkpụrụokwu ziri ezi ezughị. Enwere puku kwuru puku vidiyo a na-ebipụta kwa ụbọchị, yabụ nke a bụ ọgụ siri ike maka ọnọdụ kacha elu na ibe nsonaazụ ọchụchọ.
Otú ọ dị, mgbe anyị lere anya n'ụzọ ọzọ, ihe nwere ike ịgbanwe. Ọ bụrụ na ịzụrụ ndị debanyere aha YouTube ma ọ bụ oge nlele, ihe gị ga-apụta na igwe nchọta dịka YouTube, Google, Yahoo na Bing. Mkpuchi mkpuchi gị na-abawanye, ohere gị nke ịrịgo n'elu ibe ọchụchọ na-akawanye mma.
Uru pụtara ìhè: Welite ntụkwasị obi maka onyinye ego ndị ọzọ
Zụrụ awa elekere YouTube na-akwalite ntụkwasị obi nke ọwa gị n'ozuzu ya, nke nwere ike ịdọtakwu ohere iji soro ndị nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ na-eme ihe ike na YouTube na-emekọ ihe.
Mgbasa ozi n'ime iyi
Ndị mgbasa ozi ga-enwe mmasị ịkpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ntụkwasị obi karịa na mkpughe n'ihi nsonaazụ elekere elekere dị elu.
Ọzọkwa, ndị mgbasa ozi na-adaberekarị na ọwa YouTube ama ama nke nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ na ogologo oge nlele iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. N'ịtụnyere mgbasa ozi n'ime iyi, YouTube anaghị ewere akụkụ nke ego ị na-eme site na ọdịnaya akwadoro. N'ihi ya, nke a bụ ụzọ kachasị dị irè iji nweta ego ọwa YouTube gị. Otú ọ dị, ọ chọrọ ntụkwasị obi, dị ka ihe àmà dị ịrịba ama na-eso ya na puku kwuru puku awa nche.
Ngwaahịa nwere ika
Ị nwedịrị ike ịre ihe nke gị nwere akara site na ebe a pụrụ ịtụkwasị obi. Nke a bụkwa ụzọ dị egwu iji nweta ego ọwa YouTube gị n'ihi na YouTube anaghị ekere òkè nke ngwaahịa ọ bụla ị na-ere site na ọwa gị!
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere ọwa a pụrụ ịtụkwasị obi, ndị na-ege gị ntị na-enwe mmasị karị ịtụkwasị gị obi ma ọ bụghị naanị ịzụta n'aka gị kamakwa itinye ego na atụmatụ gị! Otu n'ime ụzọ kachasị ọhụrụ na nke ewu ewu iji nweta ego na YouTube ụbọchị ndị a bụ site n'ịgbara mmadụ site n'aka ndị debanyere aha na ndị nwere mmasị.
Otu esi azụta elekere elekere 4000 maka ịkpata ego nke ọma?
Ọwa ahụ ga-agbasorịrị ụkpụrụ na ụkpụrụ YouTube
Mezue elekere 4000 nke nche ọha n'ime obere oge dị mma mana ọ pụtaghị ihe ọ bụla. Iji nweta ego ọwa YouTube gị, ị ga-achọ ijikọ na a Akaụntụ Google Adsense kwa.
Njide ndị na-ege ntị na YouTube
Na YouTube, njide ndị na-ege ntị na-ezo aka ole vidiyo gị ndị na-ekiri gị na-ekiri. N'ihi ya, ọ bụ ihe ọ̀tụ̀tụ̀ mmadụ ole na-ekiri vidio n'ụzọ nile. Ọzọkwa, na YouTube, a na-akọkarị njide onye na-ekiri ya dị ka pasentị. Ya mere, ọnụego 50% nwere ike igosi na ndị na-ekiri na-agafe na fim gị.
Ya mere inwe ihe mgbaru ọsọ n'uche kwalite njide ndị na-ege ntị na YouTube bụ ezigbo echiche mgbe niile.
Ndụmọdụ iji bulie elekere YouTube n'ụzọ nkịtị
Họrọ niche maka ọwa gị
Ọ dị oke mkpa icheta ebumnuche ọwa gị yana ndị ndị na-ege gị ntị bụ mgbe ị na-achọ niche YouTube kwesịrị ekwesị. Ebumnobi gị, dịka ọmụmaatụ, njirimara na iru ma ọ bụ nyocha na nleba anya ngwaahịa? Ka ị bụ onye na-emepụta ọdịnaya karịa ụlọ ọrụ? N'ihi ya, ebumnobi gị nwere ike ịgụnye mgbasawanye ọwa, mmekọrịta ndị na-ege ntị, ma ọ bụ ebumnuche ndị na-ege ntị.
Nyochaa isiokwu YouTube
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ọwa YouTube gị pụta ìhè, ị ga-achọ mee nchọpụta isiokwu ụfọdụ. Ịkwalite ogo nke organic gị, wulite mmata akara, na inweta nghọta na-enweghị atụ bụ ụfọdụ uru ị nwere ike nweta na ya.
VidIQ bụ otu ngwanrọ na-enyere aka nke nwere ike ịkwado YouTube SEO nke ọma. Ndị ọrụ nwere ike iji ngwá ọrụ a chọọ ma họrọ aha enyi na enyi SEO, nkọwa vidiyo, na mkpado.
Bulite vidiyo gị tupu ibipụta ya
Enwere Atụmatụ 6 iji kwalite vidiyo tupu ikesa ha na ọwa YouTube gị:
Aha siri ike: Ọ ga-enwerịrị mkpụrụokwu, dakọtara ọdịnaya gị, jiri braket, ma zere ịpịbait.
Nkọwa dị mkpa: Ikwesiri ikwugharị mkpụrụokwu, kwalite ọnụego ọpịpị, tinye njikọ, metadata, na timestamps n'ime igbe nkọwa.
Ndepụta Okwu: Ị nwere ike ịga na YouTube Onye Okike Studio gị, họrọ otu vidiyo, họrọ Ndepụta Okwu/CC, họrọ asụsụ ndepụta okwu wee pịa Tọọ Asụsụ.
Hashtags: A na-ejikarị hashtags gosi isiokwu vidiyo, ụdị, ma ọ bụ ọpụrụiche. Hashtags pụtara n'elu aha vidiyo ma ọ bụ na igbe nkọwa vidiyo na YouTube.
Kaadị YouTube: ụdị kaadị 5 kwesịrị ịdị na vidiyo gị (bọtịnụ ndenye aha, vidiyo ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ, ọwa, onyinye, ntuli aka, njikọ)
Ihuenyo ngwụcha: Ọ na-ewe 15-20 sekọnd. Ị ga-aga na YouTube Onye Okike Studio, họrọ ọdịnaya, pịa vidiyo nke ịchọrọ idezi, họrọ igbe ihuenyo njedebe, wee họrọ mmewere ịchọrọ ịgbakwunye.
Kwalite vidiyo gị mgbe ebulitechara
N'ime ọtụtụ ụzọ iji kpọsaa vidiyo YouTube gị, iji soshal midia nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ kachasị elu. Mgbasa ozi sitere na Mgbasa ozi Google nwere ike inyere gị aka iru ọtụtụ mmadụ sitere na mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ dị ka TikTok, Instagram, Facebook, wdg na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dị ka ịtọlite ​​​​ụlọ ahịa ahịa n'ịntanetị, ịhazi asọmpi mmekọrịta ọha na eze, inye onyinye n'efu na ndị ọzọ. Usoro ikpo okwu ndị a bụ nnukwu saịtị iji jikọọ ọwa YouTube gị na ndị nwere ike ịnụ ụtọ ya.
Mmejọ 6 nkịtị nke YouTubers na-enwekarị
Oke nkwanye ugwu na nkwalite
Ụfọdụ ndị rookie YouTubers na-enwe nchegbu karị maka ịnweta nlele na mgbasa ozi vidiyo ha karịa ịmepụta ndị ka mma. Ọ bụ ihe kwere nghọta na ọ ga-eju ha anya ma ha hụ ọwa ndị ọzọ na-anata puku kwuru puku ma ọ bụ iri puku kwuru iri puku vidiyo maka vidiyo ndị mara mma dịka nke ha. N'ụzọ dị mwute, rookie YouTubers nwere ike ime ụfọdụ ntụpọ n'ihi ụdị echiche a.
Ọnụ ọgụgụ ozi dị na-erikpu ya
Enwere ike ịgbagwoju gị anya na mbụ maka ọtụtụ isiokwu dị na YouTube. Ma ị kwenyere na ị nwere ike itinye oge maka ihe dị iche iche. Yabụ ị na-anwale egwuregwu, vlogs, parodies, nyocha ihe nkiri, foto, na ihe ndị ọzọ. Mana nke bụ́ eziokwu bụ na ezighị ezi kemgbe i kwetara isonye n’ihe karịrị otu isiokwu.
Ọ na-eme mgbe ị na-eche banyere akụrụngwa niile dị oke ọnụ, dị ka igwe okwu, igwefoto, na ọkụ. Ị na-eche naanị maka ngwa kacha mma, mana ị chefuru na ọdịnaya bụ eze. Ọnọdụ a malitere site na mbido mbụ nke ịhazi ọwa, ọ nwere ike ịdịgide n'echiche gị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọpụta ihe ị ga-ebute ụzọ.
Eleda njirimara nchịkọta ọnụ ahịa
Ngalaba nyocha na YouTube Onye Okike Studio nwere ike bụrụ nke kacha atọ ụtọ. Nke a na-enye ndị na-emepụta ohere ịhụ ma soro mmekọrịta na ntinye aka nke ọwa ha na oge na vidiyo ọ bụla. Ọzọkwa, a na-ekewa taabụ nyocha ụzọ anọ, nke ọ bụla nwere ngwaọrụ na ọrụ nke ya.
Ya mere ọ bụrụ na ịnweghị ike iji ya mee ihe, ị gaghị ama otu esi ejikwa ike iru vidiyo gị yana usoro kachasị mma bụ. A na-atụ aro ka ị lebakwuo anya na nke a Blọọgụ AudienceGain iji ghọta nke ọma YouTube Analytics.
Mee ihe niile n'onwe gị
O kwere omume na ịrụ ọrụ na ọwa YouTube ga-eme ka owu na-ama gị. Ị na-ede ihe nke gị, gbaa vidiyo nke gị, ma dezie ha n'onwe gị. Ọbụna ị na-akparịta ụka na igwefoto mgbe ị na-ese vidio bụ otu okwu na igwefoto. N'ihi nke a, ị ga-enwe mmechuihu ugboro ugboro ebe ọ bụ na ọ nweghị onye maara ihe ị na-ere ma ị ka na-arụ ọrụ naanị gị. Ọzọkwa, ọnọdụ a nwere ike igbu oge imepụta ihe gị, na-eduga na ọtụtụ mmejọ YouTubers ọhụrụ na-eme mgbe ha rapaara n'ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ.
Nweta mkpali sitere na YouTubers ndị ọzọ
Mgbe ị rapaara maka echiche ma ọ bụ na-agbalị iji ọwa YouTube gị tụnyere ọwa ndị ọzọ a ma ama, ị na-eleba anya n'ọrụ ndị ọzọ wee gbalịa ịchọpụta ihe na-eme ha akara. N'ụzọ dị mwute, mmadụ ole na ole na-aghọta na nke a bụ otu n'ime mmejọ ndị na-emekarị nke ndị rookie YouTubers mere.
→ Ndị dị n'elu bụ njehie ndị YouTubers dị mfe izute, mana ha adịghị atụ egwu ebe ọ bụ na ị nwere ike ịchọta ngwọta dị irè sitere na AudienceGain.net.
Onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ọwa YouTube wee nweta ego site na ya n'onwe ya. Agbanyeghị, iji nwee ike ịgbanye ego, ọ ga-ewe oge na mbọ dị ukwuu yana oke agụụ. Zụrụ awa elekere YouTube bụ ihe ngwọta kwesịrị ịtụle n'ihi na ọ na-enye ọtụtụ uru ogologo oge.
Yabụ, egbula oge ịchọ ọrụ a na saịtị ndị a ma ama dị ka AudienceGain.net. Kpọtụrụ ha ugbu a iji nweta ndụmọdụ bara uru na onyinye mara mma!
Kedu ka ọ si arụ ọrụ? Gịnị bụ ihe ndị a chọrọ?
Anyị ga -ebu ụzọ lelee ma nyere gị aka melite adịghị ike nke ọwa gị, dị ka ọdịnaya, ogo vidiyo, uto mkpụrụ osisi, wdg, iji mee ka afọ ju amụma YouTube. Anyị na -aga n'ihu ịkwalite ndị na -ege gị ntị vidiyo gị na saịtị ịkparịta ụka n'Ịntanet YouTube kwadoro. Ọ bụ otu a ka anyị si enyere gị aka mezuo ọnọdụ ịkpata ego YouTube n'enweghị nsogbu na ngwa ngwa.
Kedu ihe ndị a chọrọ?
Anyị achọghị ka ọwa gị nwee vidiyo 1-2 awa n'ogologo mana vidiyo gị ga-abụrịrị ihe karịrị nkeji ise ọ bụla na ngụkọta oge ọwa ga-abụrịrị nkeji 5. N'ihi na site na ahụmịhe afọ anyị, ogologo ọwa nwere nkeji 60, na -eweta nsonaazụ ka mma mgbe YouTube na -enyocha ọwa maka ịkpata ego.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji họrọ anyị mana ọ bụghị ndị ọzọ?
Na AudienceGain, anyị anaghị ere naanị ọrụ ego mana anyị na-elekwasị anya na ebumnuche nke ịkwado ndị na-emepụta YouTube na usoro kachasị mma iji bulie ọwa YouTube, yana ịnwe ka anyị nweta ego na iwepụta ego.
Banyere ndị ọhụụ ekpughere na akụrụngwa Youtube mana ha chọrọ ịkpata ego na ikpo okwu a, anyị ga-eso gị site na obere obere usoro iji ruo ihe ịga nke ọma!
Nkwụghachi ma mezuo iwu ahụ n'efu ma ọ bụrụ na ọ nweghị ike mezue n'oge enyere ya.
Nkwụghachi 100% ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ na -ebute mmetụta ọjọọ na ọwa.
Nkwụghachi 100% ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ enweghị ike inyere ọwa gị aka ị nweta ego.
Cheta na: Gbaa mbọ hụ na ọwa gị na -agbaso iwu mmebe ego nke YouTube.
100% enyere maka ego
100% nke oge elekere sitere na ezigbo ndị na-ege ntị
Organic ma kwụsie ike na-eto eto n'oge mkpọsa ahụ
Enweghị ogologo vidiyo chọrọ
Redesign ọwa ọkọlọtọ n'efu
Nkwụghachi zuru ezu ma ọ bụrụ na ịnabataghị chanel gị maka ego
Na -egbu oge na ọrụ ahụ? Ka anyị kpochapụ ha.